शुक्रवार, सेप्टेम्बर 10, 2010 बिहीबार, जुन 18, 2015 निक कार्टर
केही हप्ता पहिले, मैले ड्रिप मार्केटि series श्रृंखलाको भाग १ पोस्ट गरे। कसलाई परवाह छ? कुन, वास्तविकतामा, कसरी नेतृत्व सिर्जना गर्ने भन्ने बारे लेख बनियो। उपन्यास विचार, हैन? तपाईंले ड्रिप गर्नु अघि, तपाईंसँग ड्रिप गर्नका लागि एक दर्शकहरू हुनुपर्दछ। ठिक छ, यदि त्यो अवधारणा तपाईको लागि अति प्राथमिक देखिन्थ्यो भने, त्यसोभए तपाईंले अब पढ्न रोक्नु पर्छ। मेरो सल्लाह यस हप्ता अझ बढी आधारभूत छ: चूस नगर्नुहोस्।
मैले मेरो पहिलो ड्रिप अभियान लेखेको थिएँ १ wrote मिनेट पछि मैले एड्रेसटूमा ड्रिप मार्केटि wrote् सुविधाहरू जारी गरे। होईन, मैले गरे। मैले एउटा कार्यक्रम लेखें, र त्यसपछि सोचें, "अहो, हेक के हो, मलाई लाग्छ कि म यसलाई अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्ने छु।" मैले हरेक नि: शुल्क परीक्षण नेतृत्वको लागि लामो copy प्रतिलिपि ईमेलहरूको शृंखला लेख्न लगभग minutes० मिनेट जति खर्च गरे। अन्दाज गर्नुहोस्। तिनीहरूले चुस्के
त्यस समयदेखि, मैले ड्रप मार्केटिंगको बारेमा आज मलाई थाहा भएका सबै कुरा जानेको छु लोरेन बल। मैले के सिके? उनको सामग्री चोक छैन। त्यो राम्रो थियो। एकदमै राम्रो। यति राम्रो, वास्तवमा, यदि तपाईले ई-कोर्सको लागि कसरी एउटा व्यवसाय योजना लेख्ने बारे साइन अप गर्नुभयो, परिणाम उल्लेखनीय छ: तपाई वास्तवमै सिक्नुहुन्छ कसरी एक व्यवसाय योजना लेख्न। तपाइँ हप्ता पछि टिजरहरू प्राप्त गर्नुहुन्न कसरी तपाइँ एक व्यापार योजना लेख्न सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर। कसरी तपाईं पर्याप्त राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा hype संग पम्प छैन, तपाईं पर्याप्त चलाख हुनुहुन्छ, र doggone- यो मानिस तपाईं लाई। तपाईले पत्ता लगाउनु हुन्न कि तपाईले पनि plan १। .4 / / मो को 19.95 सजिलो किस्ताको लागि व्यवसाय योजना लेख्न सिक्न सक्नुहुन्छ। होइन, उनको सामग्री चूसदैन।
यदि तपाईं ड्रिप मार्केटिंग लेख्दै हुनुहुन्छ भने, चूस नगर्नुहोस्। तपाईंको उत्तम सामग्री दिनुहोस्। तपाईंले स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि मानिसहरूले तपाईंको ड्रिपको लागि केही मूल्य प्राप्त गर्न साइन अप गरे, र यदि उनीहरूले यसलाई प्राप्त गरेनन् भने, तिनीहरूले सदस्यता रद्द गर्नेछन्। त्यसोभए, तपाईंले ड्रिप सामग्री लेख्ने क्रममा यी प्रिन्सिपलहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस्:
किन प्राप्तकर्ता यस सामग्री प्राप्त गर्न सहमत भए? तिनीहरू के इनबक्समा तपाईंको ईमेल प्राप्त गर्ने लागत (हो, लागत) को बदलामा प्राप्त गर्ने आशामा छन्? त्यसो भए ... के तपाई त्यो अपेक्षालाई पूरा गर्दै हुनुहुन्छ??
यस सन्देश प्राप्त गरेर प्रापकलाई कसरी फाइदा हुन्छ? तपाइँले यसलाई प्राप्त गर्दा तपाइँले कसरी लाभ उठाउनुहुनेछ, हामी त्यो पछि प्राप्त गर्नेछौं। सर्वप्रथम, उनीहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ जवाफ दिनुहोस्। यदि त्यहाँ उनीहरूको लागि केहि छैन भने तिनीहरू यसलाई प्राप्त गर्न रोक्छन्.
यस सन्देश प्राप्त गर्नेबाट तपाईंलाई कसरी फाइदा हुन्छ? हो, हामी त्यो प्रश्न सोध्न सक्छौं, तर विचार गरिएको क्रममा नोट गर्नुहोस्। के तपाई यहाँ खोज्न को लागी सामग्री छ कि तपाइँ सिकाउन वा प्राप्तकर्ता संग साझा गर्न सक्नुहुनेछ कि (१) तिनीहरुलाई फाइदा हुन्छ जबकि (२) एक साथ तपाईलाई फाइदा हुन्छ यो ज्ञातबाट। बिक्री प्रशिक्षण विज्ञहरूको विपरित, क्रेतालाई शिक्षा दिदैँ नि: शुल्क जानकारी दिंदैन। एक शिक्षित क्रेता एक राम्रो संभावना / ग्राहक हुन सक्छ। यो के हो जुन तपाईं उनीहरूसँग संलग्न हुनु अघि प्रत्येक सम्भावनालाई जान्ने इच्छा गर्नुहुन्छ?
यदि तपाईंले चूस्नुभयो भने (कि, केवल बेशरम स्ट्रिंग-साथ र प्रचार सामग्री साझा गर्नुहोस्) तपाईंको सकारात्मक परिणाम हुन सक्छ: बिक्री। यदि तपाईंले चूस्नुभयो भने, तथापि, तपाईं बिक्री पनि पाउनुहुनेछ। होइन, वास्तवमा, तपाईं हुनेछ। यो गर्न सकिन्छ, र राम्रोसँग। ठूलो बिक्री। खुशी बिक्री। र एउटा अर्को कुरा: अधिक ग्राहकहरु। व्यक्तिले राम्रो सामग्री फर्वार्ड गर्छन्, राम्रो विज्ञापन प्रतिलिपि होइन। Suck र तपाईं अझै बेच्न सक्छ। चूस नगर्नुहोस्, र तपाईं बारम्बार बेच्नुहुन्छ। तपाईं निर्णय।
टैग: ड्रिप ईमेल सामग्रीड्रिप मार्केटिंगईमेल सामग्रीलोरेन बलराउन्डपेग
निक कार्टर साँच्चिकै मुटुमा उद्यमी हुन्। उहाँ लेखक हुनुहुन्छ फिर्ता नभएको, साथसाथ ठेगाना wo को संस्थापक, ए साना व्यापार CRM सफ्टवेयर जसले उद्यमीहरूलाई उपकरणहरू र प्रक्रियाहरू प्रदान गर्दछ उनीहरूको बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न र तिनीहरूको मार्केटिंग स्वचालित गर्न।
कसले मलाई रीट्वीट गर्यो?
सेप्टेम्बर १,, २०११ 10::2010० अपराह्न
यो जान्नको लागि राम्रो लाग्छ, म चूस्दिन ... गम्भीरतापूर्वक, म सेठ गोडिन मोडेल अनुसरण गर्दछु। यसलाई दिनुहोस्, र यदि सामग्री पर्याप्त राम्रो छ, व्यक्ति अझै पनि यसको लागि तिर्न हुनेछ।
मैले सम्पूर्ण ट्राइब्स अडियो पुस्तकमा नि: शुल्क सूचीकृत गरें, तर अझै एक प्रतिलिपि किन्नुभयो। मैले मेरो ग्राहकहरु पनि पाए!